Ogaden News Agency (ONA) – Safiirka QM u Fadhiya Dawladda Eretreeya oo ku Tilmaamay Fadeexad Wararka ay ka Qortay Haya’adda UNHR Dalka Ertreeya
Posted by ONA Admin	/ November 23, 2014
Diblomaasiyiinta dawladda Eretreeya u jooga Qaramada Midoobay ayaa ku eedeeyay haya’adda qaxootiga qaabilsan ee UNHCR inay warbixin khaldan qortay markay sheegtay in 37dii maalmood ee lasoo dhaafay ay dad Eretreeya ah oo gaadhaya 6000 weydiisteen qaxootnimo dalka Itobiya.
Safiirka Eretreeya Amb. Girma Asmerom ayaa ku tilmaamay arimaha noocan ah in loola jeedo in dacaayad lagu furo dawladda Eretreeya si shacabka looga horkeeno.
Waxay habooneyd buu yidhi safiirka inay UNHCR yarehe qurxiyaan warkooda si looga rumaysto, sababtoo ah wax dhici kara ma’aha inuu qof Itobiya iska dhiibo. Mana fahmi karno buu yidhi safiirka sababta ay ereyada qaarkood u isticmaalayaan sida (Asylum-seekers iyo Refugee), taasoon qabanin hadda dadweynaha Ertreeya. Ujeedada laga leeyahay arimahaa wax kale ma’aha ee waa in dawladda Ertreeya sumcadda laga dilo.
Wuxuu Safiir Girma Asmerom u sheegay saxaafadda arin lawada ogsoon yahay oo ah nabadda ka jirta dalka Ertreeya in aanay ka jirin Itobiya iyo meela badan oo caalamka ka mid ah. Wuxuu sheegay inay wasiirada dalka Ertreeya dadweynahooda dhex socdaan iyagoo wax ilaalinaya jirin, taasoon laga yaabin inay ka dhacdo Itobiya. Wuxuu raaciyay Safiirka; ma jirto meel aan ahayn gegada dayaaradaha ood ku arkayso qalabka elektroonikada ee la’isku baadho, xafiiska m/weynahahana ha ahaatee.
Haya’ada raacsan QM ayaa waayadan dambe loo adeegsadaa in kolba dawladii la doonayo lagu sumcad dilo, iyadoo dawladaha sida dhabta ah ugu xad-gudba xuquuqda aadanaha aan waxba laga sheegin. Sida Itobiya oo si dhab ah loo ogsoonyahay inay xad-gudub maalin kasta ah ay ku hayso guud ahaan shacabka Itobiya ee ka soo horjeeda xukunka kali-taliska ah ee TPLF/EPRDF, ama shacabka Ogadenya ee diidan gumaysiga Itobiya.